မြန်မာလူမျိုးတွေ စေတနာကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘာလို့ အများစု ဆင်းရဲနေကြသလဲ??? ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
မြန်မာလူမျိုးတွေ စေတနာကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘာလို့ အများစု ဆင်းရဲနေကြသလဲ???
Author: lu bo | 9:28 PM | No မှတ်ချက် | Barlarlar
ဒါကို ပညာရှင်တစ်ယောက်က ဒီလို ဖြေသွားပါတယ်။ ************************************* မြန်မာအများစုက ( TEAM WORK ) အားနည်းတယ်။ မညီညွတ်ဘူး။ ဘေးက နေ သွေးခွဲရလွယ်တယ်။ မနာလိုစိတ် များတယ်။ အချင်းချင်းထဲ ကိုယ့်ထက်သာသွားမှာ မလိုလားဘူး။ သာရင်လည်း မနာလိုဘူး။ သူများကို ချီးကျူးရင် မကြိုက်ဘူး။
ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ချီးကျူးစေချင်တယ်။ မုဒိတာ မပွါးနိုင်ဘူး။ ကြိုးစားရမယ့်နေရာ တက်တက်ကြွကြွ မရှိဘူး။ သူများမလုပ်ရင် မလုပ်ချင်ဘူး။ အ ချောင်ခိုချင်တယ်။
ပိုက်ဆံရရင် အဖြုန်းများတယ်။ ဘာဝယ်ရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားတယ်။ ကိုယ်နဲ့အသုံးတည့်တည့် မတည့်တည့် သူများဝယ်ရင် လိုက်ဝယ်ချင်တယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ရမှာ ကြောက်တယ်။ ရေရှည် အကျိုးစီးပွါးကို မ မျှော်ကိုးတတ်ဘူး။ ပုံမှန်သေချာရတဲ့ ငွေကို ပိုမက်တယ်။ ၀န်ထမ်း ပိုလုပ်ချင်တယ်။
အ တွေးအခေါ်ပိုင်းမှာ တီထွင်ကြံဆမှု နည်းတယ်။ မိရိုးဖလာ အ တွေးအ ခေါ်ကို မပယ်နိုင်ဘူး။ အများလုပ်တာပဲ စောင့်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး ၀ိုင်းလုပ်တတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ရေရှည် မခံဘူး။
ပြောင်းလဲနေတဲ့ ခေတ်ကို လိုက်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ပညာရေးမှာ အားနည်းတယ်။ ဗဟုသုတ လေ့လာဖို့ အားနည်းတယ်။ စိတ်မ၀င်စားဘူး။
ဝေဖန်တာကို အားသန်ပြီး လက်တွေ့ကျကျ ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းတယ်။ အကြံပြုတာကောင်းပြီး တကယ့် စီမံခန့်ခွဲဖို့ကျ ညံ့တယ်။
ပုတ်ခတ်တာကို မတရား ကြိုက်တယ်။ ကိုယ်ကျရှုံးတိုင်း သူများလည်း ကျရှုံးရမယ်ဆိုတဲ့ အမြင်ရှိတယ်။ ရှုံးပြီး ပြန်ထဖို့ ပျင်းတယ်။ မ အောင်မြင်ရင် ကံကို ပုံချတယ်။ ကိုယ်ကြုံဖူးတဲ့ အ တွေ့အကြုံတစ်ခုတည်းနဲ့ အရာတော်တော်များများကို တစ်ဖက်သတ်သုံးသပ်တယ်။
ကိုယ်နဲ့ အမြင်မတူရင် အားမ ပေးဘဲ မတရား ရှုံ့ချတယ်။
ဘုရားရှိခိုးတိုင်း ချမ်းသာရပါလို၏ ဆုတောင်းပြီး အခွင့်အလမ်းလာရင် အခွင့်အလမ်းမှန်းသိအောင် မ လေ့လာဘဲ ကျော်သွားတယ်။ ပြီးတော့ ပုံမှန်ဘ၀ထဲမှာ ခပ်ပျော်ပျော်နေတယ်။ ကိုယ့်အကြောင်းထက် သူများအ ကြောင်းကို ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်။ လေကန်ပြီး အချိန်ဖြုန်းတာ များတယ်။
ပိုဆိုးတာက ပိုက်ဆံတော့ ရှိပါရဲ့။ တိုးပွါးအောင် လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးနည်းတယ်။ ပိုက်ဆံကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားတယ်။ အကျိုးရှိအောင် မရင်းနှီးတတ်ဘူး။ ဘ၀မှာ ပိုက်ဆံတစ်ခုပဲ ရှိအောင် လုပ်တယ်။ အောင်မြင် ကျော်ကြားဖို့၊ အများအတွက် ဆောင်ရွက်ဖို့ စိတ်မ၀င်စားဘူး။
ကိုယ်သိတာကို သိသလို အသုံးမချတတ်ဘူး။ ပညာရှင်တွေကလည်း ကိုယ့်ပညာကို မျှဝေမ ပေးချင်ဘူး။ လူတော်တွေပေါ်ထွက်လာအောင် မ မွေးမြူချင်ဘူး။
Credit to Kumara Ashin
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ဘ၀မှာ မ အောင်စေတဲ့ သဘာဝ လေးတွေကိုလည်း ပုံလေးတွေနဲ့ ပူးတွဲဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆောင်ရန်နဲ့ ရှောင်ရန်ကို ကွဲပြားခွဲခြားနိုင်ပါစေ။
U Mg Mg